Uyilo lwePCB -Shenzhen Sichi Technology Co., Ltd.
Ukuba unesikimu okanye umzobo, kodwa awunalo ixesha okanye izixhobo zokugqibezela uyilo, sinokukunceda.
Kukho amanyathelo ali-11 kwinkqubo yoyilo lwe-PCB kunye nokuhamba komsebenzi esikugubungela kwisikhokelo sokuyila i-pcb.
Inyathelo 1: Gqibezela uyilo lweesekethe
Inyathelo 2: Khetha i-PCB yoyilo lweSoftware
Inyathelo 3: Bamba iSikimu sakho
Inyathelo lesi-4: Uyilo lweeNxalenye zeNyathelo-Nje ukuba iskim sigqibe ixesha laso lokuzoba ulwandlalo lwento nganye. Ezi zinto zibekiweyo zibekwe kwi-pcb ngobhedu ukuvumela ukuba izinto zithengiselwe ibhodi ye-wiring eprintiweyo.
Inyathelo 5: Ukusekwa kwePcBline ye-PCB-Iprojekthi nganye iya kuba nezithintelo ezinxulumene nolwandiso lwebhodi Oku kufuneka kugqitywe kweli nqanaba kuba umbono wokubalwa kwamacandelo kunye nendawo kufuneka yaziwe.
Inyathelo lesi-6: Cwangcisa iMigaqo yoYilo-Ngokucaciswa kwe-pcb kunye neenyawo zepcb, lixesha lokuqala ukubekwa Phambi kokubekwa kufuneka usete imigaqo yoyilo ukuqinisekisa ukuba izinto okanye umkhondo awusondelelananga lo ngumzekelo omnye nje Kukho amakhulu emithetho eyahlukeneyo enokusetyenziswa kuyilo lwe-pcb.
Inyathelo 7: Beka iiNxalenye -Ngoku lixesha lokuhambisa icandelo ngalinye kwi-pcb kwaye uqalise umsebenzi odinisayo wokwenza onke la macandelo adibane.
Inyathelo 8: Umkhondo wendlela eyahlukeneyo-Kuyimfuneko ukuba uhambe ngendlela ebukhali imizila.Clocks.Power.Sensitive analog trace.Ukuba ugqibile ungayiguqula inyathelo 9.
Inyathelo 9: Sebenzisa i-Auto Router- Kukho imithetho embalwa eya kuthi isetyenziselwe ukusebenzisa i-autorouter, kodwa ukwenza njalo kuya kukugcinela iiyure ukuba ayizintsuku zokuhamba ngomkhondo.
Inyathelo 10: Sebenzisa uMhloli woYilo loMgaqo-Uninzi lweephakeji zesoftware yoyilo zinokusetwa okuhle kakhulu kwabavavanyi bolawulo kuyilo olulula ukophula imithetho yokushiya i-pcb kwaye oku kuyakukhomba impazamo ekukugcinele ukuba uphefumle i-pcb.
Inyathelo 11: Iziphumo zeGerber-Ukuba ibhodi ayinasiphako lixesha lokuba ukhuphe iifayile ze-gerber. Ezi fayile zibanzi kwaye ziyafuneka kwizindlu ze-pcb zokwenza ibhodi yesekethe eprintiweyo.
Emva koYilo lwe-PCB, sinokuthabatha uyilo lwakho lube yinyani kunye ne-PCB yokuqamba kunye neenkonzo zebandla le-PCB.